Mogadishu Journal » Madaxweyne Xassan Sheekh oo soo dhaweeyay hishiiskii Addis Ababa dhinaca kalana sheegay in ay wada hadal la furayaan Puntland
Mjournal : — Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh oo Max’uud ayaa si diiran u soo dhaweeyay hishiiskii dhawaan magaalada Addis Ababa ku dhaxmaray dowladda federaalka iyo maamulka Jubba ee gobollada Jubbooyinka iyo Gado.
Waxaa uu sheegay madaxweynaha in wada hadallada ku soo dhamaaday magaalada Addis Ababa hishiiska halkaa lagu gaaray uu qeyb ka yahay qorshaha dowladda ee dhinaca dib-u-hishiisiinta, isaga oo sheegay in wada hadallada Addis Ababa soo afjareen mashaakil siyaasadeed oo in mudo ahba ka taagnaa gobollada Jubbooyinka.
“Wuxuu ahaa hishiis meel dhexe leysugu yimid, wax badan ayeey dowladdu tanaasushay si xal loo gaaro, hishiiskku wa billow ah wuuna sii socon doonaa inta laga dhameystirayo; dowladduna waxay diyaar u tahay inay ka hor-tagto wax kasta oo keenaya colaad kusoo laabata deegannadaas,” ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh.
Dhinaca kale madaxweyne Xassan Sheekh Max’uud ayaa soo hadal qaaday go’aankii dhawaan maamul gobolleedka Puntland uu xiriirka ugu jiray dowladda dhexe, isaga oo arrintaa ku tilmaamay mid nasiib darro ah.
“Waa arin siweyn looga xumaado in qaar ka mid ah mas’uuliyiinta Puntland ay xilligan ku dhawaaqaan inay xiriirka u jareen dowladda Soomaaliya, balse waxaa socda qorshe aan ku doonayno inaan wadahadal kula furmo is arrinta keentay hadalkaas aan meesha uga saarno,” ayuu yiri madaxweyne Xassan.
Waxaa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya marar badan muujisay sida ay raali uga tahay maamulka Puntland iyo hormarka dhincyada badan uu sameeyay, laakiin waxaa uu muujiyay madaxweyne Xassan Sheekh in aan la jecleysan karin wararka inta badan ka soo yeeray mas’uuliyiinta maamulka Puntland.
“Waa la qaldamayaa bani’aadamn ayaan nahay waana macaamilaynaa haddii uu khalad dhaco waa laga wadahadli karaa waana la is-fahmi karaan, innaguna waxaan ku dadaalaynaa sidii aan uga daweyn lahayn waxyaabaha keenay in Puntland ay ku dhawaaqdo inay xiriirka u jartay dowladda,” ayuu madaxweynuhu ku daray hadalkiis.
Waxaa uu sheegay madaxweynaha in dowladdiisu ka go’an tahay in ay la hadasho cid kasta oo wax tabaneysa si loo dhameeyo ayuu yiri khilaaf kasta oo taagan maadama dowladdiisu tahay mid ku dhisan nidaamka dib-u-hishiisiinta.
Hadalka madaxweynaha ayaa imanaya xili dhawaan maamul gobolleedka Puntland uu ku dhawaaqay in uu xiriirka u jiray dowladda dhexe kadib markii ay ay ku eedeeyeen mas’uuliyiinta dowladda in ay fara-galin joogta ah ku hayaan dastuurka federaalka, dhinaca kalana ay ka soo horjeedaan nidaamka ay dowladdu ku dhisan tahay ee federaaliisam-ka.